Bido Oge Izu-Ike Chagbanwe Onewa Otu Obodo n'Oge | Martech Zone
Monday, October 4, 2010 Saturday, October 18, 2014 Bọọlụ Lorraine
Izu ụka a ka ndị mmadụ 125 si karịa mba 30 jiri ụbọchị ole na ole tụlee etu izu mmalite ga-esi nwee mmetụta dị mma na akụnụba ụwa anyị. Na-ada ada? Ntọala Kauffman dị njikere ịkụ nzọ $ 400,000 anyị abụghị. Ha enyela onyinye afọ atọ nke mere ka ndị StartUp Weekend team gbasaa ruo ndị ọrụ 8 oge niile.
Ndị otu pere mpe a, n'aka nke ha, ga-enye nkwado maka ọtụtụ narị mmemme StartUp Weekend gburugburu ụwa. Kedu? Nke ahụ bụ ihe nzukọ dị na Kansas City na ngwụsị izu a gbasara. Ndị otu a bụ ngwakọta nke mbido izu ụka na ndị na-agagharị agagharị, ndị nke ọ bụla n'ime ha mere ka ha bụrụ ndị na-ahazi ihe omume ma ọ bụ onye na-elekọta mmalite mmalite nri na obodo ha.
Dịka onye nhazi mpaghara, enwere m ohere ịgbanwere echiche n'etiti ndị mụ na ha si ebe dịka Singapore, Prague, Spain, Japan, Canada na Austraila. N'agbanyeghị ọdịiche dị n'etiti afọ na ọdịbendị, isiokwu njikọta bụ n'ụzọ doro anya otu agụụ zuru ụwa ọnụ maka ịgbasawanye obodo ụwa dum. Onye ọ bụla n’ime anyị kwenyere na ọ bụ n’ebe ahụ ka ezigbo ọrụ ga-anọ n’afọ ndị dị n’ihu.
Otu n'ime akụkọ kachasị ịtụnanya bụ recap nke mbụ Israel / Palestian nkwalite StartUp Weekend. N’agbanyeghi otutu ihe nkpuchi na nchedo nchedo ihe kariri ndi Israel 100 na ndi Palestine 30 tinyere oge 54. Mkparịta ụka ndị ahụ abụghị maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ dị ihe dị ka nkà na ụzụ.
Site na ego ọhụrụ sitere na Kauffman Foundation, izu ụka StartUp nwere ike ịgbasa ozi ya nke iwetara Eduction Ahụmịhe nye ndị ọchụnta ego. Ọ bụ ezie na ezigbo azụmaahịa na-apụta na ngwụsị izu, Start Up Weekend abụghị ụlọ ọrụ StartUp, ọ bụ Entlọ Ọrụ Ntanetị. Anyị chọkwuru ndị ọchụnta ego.
Enwere m obi ụtọ banyere ohere ọ bụla n'ụwa niile ma ana m atụ anya ịlaghachi Kansas City otu afọ site ugbu a, ka mụ na enyi m nwee mmekọrịta, ma zute ọtụtụ narị ndị ọzọ, ka ihe omume ahụ si na 100 ruo 1,000. Ruo mgbe ahụ, m na-elekwasị anya na StartUp ebe a na Indiana. Chọrọ ịmụtakwu ihe? Gaa na: http://www.startupweekend.org na http://www.indianapolis.startupweekend.org
Tags: developmentachụmnta egoIndianaIndiammepe nke ngwaahịambido izu ụka